မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတ္ကသိုလ် (အင်္ဂလိပ်: Myanmar Aerospace Engineering University) သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီလာမြို့တွင် တည်ရှိပြီး လေကြောင်း နှင့် အာကာသ ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်များကို ပို့ချပေးနေသော တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လေကြောင်း နည်းပညာ များနှင့်ပတ်သတ်သော ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို တက်ရောက်သင်ယူနိုင်သည်။
Dr. Sayne Lei Shwe. "Technology and State Development". Ministry of Science and Technology. Retrieved on 2008-12-06. Archived 10 June 2011 at the Wayback Machine.
Dr. Zaw Min Aung (2008-10-12). "Aerospace Education in Myanmar". Asia-Pacific Regional Space Agency Forum-12. Retrieved on 2008-12-06. Archived 24 October 2007 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 24 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dr. Kyi Thwin။ Space Education in Myanmar။ MAEU။ 20 October 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-12-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Clive Parker။ "Inside Myanmar's secret capital"၊ Asia Times Online၊ 2006-10-26။
Background History။ MAEU။ 11 February 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။